ဂရမ်မီဆု ရရှိခဲ့တဲ့ Cardi B ဘက်ကနေ ကာကွယ်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ လေဒီဂါဂါ - Yangon Media Group
လော့စ်အိန်ဂျလိစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃
အဆိုတော် လေဒီဂါဂါသည် ဝေဖန်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် Cardi B က အင်စတာဂရမ် အကောင့်ကို ဖျက်ခဲ့ရပြီးနောက် ၎င်းဘက်မှ ကာကွယ်ပြောဆိုပေးခဲ့သည်။ အဆိုတော် Cardi သည် ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ဝရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဆုပေးပွဲ၌ အ ကောင်းဆုံး Rap အယ်လ်ဘမ်ဆုကို ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ဆိုရှယ်မီ ဒီယာပေါ်တွင် အခြားဆန်ခါတင် စာရင်းဝင်သည့် အနုပညာရှင်များသည်လည်း ဆုနှင့်ထိုက်တန်ကြောင်း ပြောဆိုမှုများရှိခဲ့သည်။
အကောင်းဆုံး Rap အယ်လ်ဘမ်ဆုကို ရရှိခဲ့သည့် ပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော်အမျိုးသမီး အနုပညာရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည့် Cardi က ၎င်း၏အင်စတာဂရမ်အကောင့်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးနောက် သူငယ်ချင်းလေဒီဂါဂါက ယင်းဝေဖန်မှုများကို ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ လေဒီဂါဂါက ”ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်ရတာ ခက်ခဲပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဘယ်လောက် အလုပ် ကြိုးစားသည်ဖြစ်စေ လေးစားဖွယ်မဖြစ်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေဆဲပါ။ Cardi ရေ ရှင့်ကို ချစ်ပါတယ်။ ရှင်က ဒီဆုနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွက် ဂုဏ်ပြုလိုက်ကြပါစို့။ သူ့ကိုချီးမြှောက် ပေးကြပါ။ ဂုဏ်ပြုပေးကြပါ။ သူတို့သတ္တိရှိပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
Cardi က မူလက ၎င်း၏ ဆုရရှိမှုကို ကာကွယ်ပြောဆိုသော ပို့စ်နှစ်ခုကို တင်ခဲ့သော်လည်း အကောင့်တစ်ခုလုံးကို မဖျက်မီ ပို့စ်တစ်ခုကိုဖျက်ခဲ့သည်။ ယင်းကာကွယ်ပြောဆိုထားသည့် ဗီဒီယိုကို ဖျက်ခဲ့ပြီးနောက် အဆိုတော် Cardi က ၎င်း၏ အယ်လ်ဘမ်အတွက် မည်မျှအပင်ပန်းခံပြီး အလုပ်လုပ်ခဲ့ရကြောင်း ရှင်းပြထားသည့် ဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုတင်ခဲ့သည်။ ပုံစာထဲတွင် ”စတူဒီယိုထဲက သားရေဆိုဖာပေါ်မှာ သုံးလဆက်တိုက်အိပ်ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မမိသားစုရဲ့အဝေးမှာ အတ္တလန္တာနဲ့ မီယာမီမှာရှိနေခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မ နှာစေးနေလို့ မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးပုဒ်တောင်ရှိတယ်”ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
Harry Potter ရုပ်ရှင်များကို အသစ်ပြန်လည်ရိုက်ကူးမှု ရှိလာနိုင်ကြောင်း မင်းသား ဒန်နီယယ်ရက်ကလစ်ဖ် ?
တရုတ်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲ နောက်ဆုံးထားပြုလုပ်ရမည့်ရက် တိုးမြှင့်သွား မည်ဟု အမေရိ?
ကမ္ဘာ့ဖလား အကောင်းဆုံး ဂိုးအဖြစ် ပါဗက်၏ ဂိုး ရွေးချယ်ခံရ
ကမ္ဘောဇသာဒီ နန်းတော်တွင် ခရီးသွားများအား ဆွဲဆောင်နိုင်မည့် Historical Park ပြုလုပ်နိုင်ရန် ဆွေးနွေး??